Model F-7096 အရွယ်အစား 890 * 620 * 850mm ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား 850x1080 mm Mirror America အနီရောင်သပိတ်ပင်သစ်သားဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်ပစ္စည်းအမေရိကားသပိတ်ပင်သစ်သား Countertop သဘာဝစကျင်ကျောက်အင်တုံ 1280 cer တစ်ချိန်ကကြွေအင်တုံပုံသွင်းခြင်း. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာအရောင် C51 အဖြူဖွင့်ဆေးသုတ် Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & တပ်ဆင်ထားအံဆွဲဆလိုက် 1. အောက်မှာ ...
မော်ဒယ် F-7067 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1200*600*860mm ကြေးမုံ:1000*150*943မီလီမီတာပစ္စည်းအမေရိကန်သပိတ်ပင် Countertop သဘာဝစကျင်ကျောက်ဝှမ်း 1280 ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာကြေးမုံအမေရိကန်ပိတ်ပင်ဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C89 ဂန္ထဝင်အဖွင့်ဆေးသုတ် (မူရင်းသစ်သားစပါးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်) Hardware DTC အပိတ်ပိတ်ထားသောပတ္တာ & အထိုးမခံရသည့်အံဆွဲလျှော…
အသစ်ဒီဇိုင်းစျေးပေါရှေးဟောင်းရေချိုးခန်း Vanity ယူနစ်
မော်ဒယ် F-7055 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1200*600*860မီလီမီတာ、ကြည့်မှန်:950*1070mm ထိုင်းနိုင်ငံ၏သပိတ်ပင် Countertop သဘာဝစကျင်ကျောက်ဝှမ်း 1280 ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1mm Mirror Thailand သပိတ်ပင်ဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန် Color C92 အနက်ရောင်နှင့်ရှမ်ပိန်ရွှေချုံ Hardware DTC soft close ပတ္တာ & အနိမ့်ဆုံးအံဆွဲဆလိုက် 1. အစိုင်အခဲ ThailandOak သစ်သား ; 2.…
စျေးပေါသော Melamina Finish အထပ်သားပစ္စည်းဆေးသုတ်ထားသောရေချိုးခန်းအချည်းနှီးဖြစ်သည်
မော်ဒယ် PR5681000 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1000*465*880mm ကြေးမုံ:*φ700 * ၄၀ မီလီမီတာရှိသောပစ္စည်း E0 အဆင့်ရေစိုခံအထပ်သား Countertop Granite Basin 1280 ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်မြေထည်ပုံသွင်းခြင်း. Glaze အထူ>1.1mm Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန် LED မီးလုံးပါ ၀ င်သည့်အရောင် Grey Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောအံဆွဲလျှော & ပတ္တူ 1. ရေတံခွန် & duarable အထပ်သား. 2. မယ်လမင်းဆေးသုတ်ပေးသည်။
မော်ဒယ် F-7122 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1000*580*850mm ကြေးမုံ:900*1040mm ထိုင်းနိုင်ငံ၏သပိတ်ပင် Countertop သဘာဝစကျင်ကျောက်ဝှမ်း 1280 ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1mm Mirror Thailand သပိတ်ပင်ဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C24 အဖြူရောင် Hardware DTC soft close ပတ္တာ & အနိမ့်ဆုံးအံဆွဲဆလိုက် 1. အစိုင်အခဲ ThailandOak သစ်သား. 2. ရေစိုခံ & ခိုင်လုံသော ...